कथा : आमालाई माया - Safal Stories
Home Short Stories कथा : आमालाई माया
आमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो । स्कुल बिदाको दिन थियो । “आमा ! म तपाईंलाई माया गर्छु ।” बालक जोनले भन्यो । त्यसपछि आफ्नो कुरो बिर्सिएर, टोपी उफार्दै , ऊ बगैंचाको पिङ्गमा पुग्यो । आमाले बल्ल, पानि भर्न र दाउरा लिन जान पाउनुभयो ।
“आमा ! म तपाईंलाई माया गर्छु।” रोजी निलले भनि,” मैले भन्नसक्ने भन्दा पनि बढी माया गर्छु ।” भनेर के गर्नु, फेरी घन्टौं झिंज्याईरही । ऊ खेल्न गएपछि मात्र आमालाई हलुका भयो ।
फेरी सानी फ्यान आएर भनी ,”आमा ! म तपाईंलाई माया गर्छु । आज म तपाईंलाई सक्दो सहयोग गर्छु । आज स्कुल बन्द छ ।” त्यसपछि फ्यानले भाइ ननिदाउञ्जेल, बोकेर डुलाई । अनि उसले कुचो टिपी, भूई बढारी. कोठा सफा गरी । दिनभर ऊ व्यस्त र खुशी थिई । त्यति नै सहयोगी र खुशी भई, जति एउटा बच्चा हुनसक्छ ।
फेरी बेलुका “आमा ! म तपाईंलाई माया गर्छु”, ती सबैले आमालाई भने र सुत्न गए ।
तपाईं नै भन्नुहोस्, आमालाई बढी माया गर्ने को निस्कियो ?
स्रोत : जोय एलिसन , द बुक अफ भर्चुयस